UNHCR oo ka hadashay tallaabo ay qaaday Dowladda Soomaaliya - Radio Risaala: Somali News Online
Home Caalamka UNHCR oo ka hadashay tallaabo ay qaaday Dowladda Soomaaliya
UNHCR oo ka hadashay tallaabo ay qaaday Dowladda Soomaaliya
Hay’ada Qaramada Midoobey u qaabilsan Qaxootiga ee (UNHCR) ayaa Soomaliya ku bogaadisey in ay saxiixdey heshiiska lagu difaacdayo dadka Afrika ee ku barakaca gudaha dalalkooda.
Soomaliya oo ah dalka ay adduunka ugu badan yihiin dadka guryahooda wadanka gudihiisa ku barakaca waxay noqoneysaa dalkii 30-aad ee Afrika hishiiskaas saxeexa.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aya horay u saxiixay heshiiska Kampala ee ahmiyadiisu tahay difaacida dadka Afrika ee ku barakaca gudaha dalalkooda.
Sarkaal Sare oo ka tirsan Qaramada Midoobey laanta gaar ahaan Qaxootiga ayaa sheegay in heshiiskaan uu adkeyn doono tallaabooinka Guud ee loo baahan yahay in xal loogu helo dadka guryahooda ka barakacay iyo in uu Aas’aas u noqonayo nidaam sharciyeysan oo lagu difaacayo Barakacayaasha.
Soomaaliya waxaa dalkii 30.aad ee saxiixay heshiiskaas oo ay Sanadkii 2009 55 dal oo Afrikan ah ay isla wada qaateen,waxaana hehsiiskaas lagu tilmaamay mid lagu hormarinayo dadka ka barakacay Guryahooda.
Previous articleSuudaan oo ku guuleysatay Guddoomiyaha Urur Goboleedka IGAD
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo ka qeyb-galay Shir Madaxeedka IGAD